Lufthansa dia mahazo antoka bebe kokoa amin'ny tsena eto an-drenivohitra
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Vaovao Mafana Alemana » Lufthansa dia mahazo antoka bebe kokoa amin'ny tsena eto an-drenivohitra
Airlines • Airport • Vaovao Mafana Eoropeana • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Vaovao Mafana Alemana • Vaovao • fanorenana • tompon'andraikitra • Tourism • Fitaterana • Travel Wire News • Vaovao isan-karazany
Tamin'ny fametrahana ny fifamatorana farany tamin'ny volana febroary 2021, ny vondrona Lufthansa dia efa niantoka ny famerenam-bola ny trosa rehetra amin'ny 2021 ary namerina ny indram-bola 1 XNUMX tapitrisa talohan'io.
Famatorana orinasa faharoa mitentina 1 miliara euro navoaka tamin'ny 2021.
Ny fametrahana miaraka amin'ny fahamatorana roa ao anatin'ny telo sy valo taona dia mameno ny mombamomba ny fahamatoran'ny Lufthansa Group.
Ny vola voangona maharitra dia hampiasaina hanamafisana kokoa ny fatiantoka ny Vondrona Lufthansa Group.
Deutsche Lufthansa AG dia namoaka fifamatorana indray tamin'ny volabe mitentina 1 miliara euro. Ny fatorana miaraka amina antokony 100,000 500 euro dia napetraka tao amin'ny sampana roa niaraka tamin'ny fe-potoana telo sy valo taona ary vola mitentina 2024 tapitrisa Euros tsirairay avy: Ny tranche misy fe-potoana hatramin'ny 2.0 dia manana zana-bidy 2029 isan-jato isan-taona, 3.5 XNUMX isan-jato.
Tamin'ny fametrahana ny fifamatorana farany tamin'ny volana febrily 2021, ny vondrona dia efa niantoka ny famerenam-bola ny trosa rehetra amin'ny 2021 ary namerina ny indram-bola 1 XNUMX XNUMX euro mialoha ny fandaharam-potoana. Ny vola maharitra ankehitriny natsangana dia hampiasaina hanamafisana ny Vondrona Lufthansafangarony.
"Ny fametrahana fahombiazan'ny fifamatorana miverimberina indray dia manamarina ny fahazoantsika fitaovana isan-karazany amin'ny famatsiam-bola. Ireo sampana roa mandritra ny telo sy valo taona dia mifanentana tanteraka amin'ny mombamomba antsika. Ho fanampin'izany, afaka mahazo famatsiam-bola amin'ny tsena renivohitra amin'ny teny mahasoa kokoa isika raha oharina amin'ny fepetra fampiorenana. Manohy miasa amin'ny fomba tsy miangatra amin'ny fandaminana indray izahay mba hamerenana haingana ireo fepetra fampiorenana ny governemanta, "hoy i Remco Steenbergen, Lehiben'ny tompon'andraikitra ara-bola ao amin'ny Deutsche Lufthansa AG.
Tamin'ny 31 martsa, ny Vondrona dia nanana vola sy vola mitentina 10.6 miliara euro (ao anatin'izany ny vola tsy voangona avy amin'ireo fonosana fanamafisana any Alemana, Suisse, Austria ary Belzika). Tamin'izany fotoana izany dia nampiasa vola manodidina ny 2.5 lavitrisa euro tamin'ny fonosana fanamafisana ny governemanta 9 lavitrisa Lufthansa.
Ho fanampin'ny olan'ny fifamatorana anio, ny vondrona Lufthansa dia manohy manomana ny fampisondrotana ny renivohitra. Ny vola azo dia mandray anjara manokana amin'ny famerenana ny fepetra fanamafisana ny Tahirim-bola ho an'ny fanamafisana ny toekarena Alemanina (ESF) ary ny famerenana amin'ny laoniny ny rafitra renivohitra maharitra sy maharitra. Ny Birao mpanatanteraka sy mpanara-maso dia mbola tsy nandray fanapahan-kevitra momba ny habe sy ny fotoana mety hampiakarana renivohitra. Ankoatr'izay, ny fankatoavan'ny ESF momba izany dia tsy maintsy azo.